Gobolka Gedo ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dilaacay Shuban Biyood | maakhir.com
Gobolka Gedo ayaa laga soo sheegayaa inuu ka dilaacay Shuban Biyood
February 29, 2008 in Somalia
Baardheere:- Wararka ka imaya Degaanadaasi ayaa Waxaa ay shegayaan In Dad fara abdan uu ku dhuftay Cudurkaasi Shuban biyoodka oo ka mid ah Cudurada Halita ku ah Dhalaanka iyo Dadka kale ee aan awooda fiican lahayn,Wararku waxay shegayaan in Dad Cadakoodu Gaar ayo ilaa 70 Qof ay u dhimatay Qaarkalena ay Haatan u jiifaan.
Waxaa intaa dheer in Dhaqaatiirta Cisbitaaladaasi ay ku Waramayaan Inuu yahay Cudurkani Mid wayahan dame ku dhuftay Degnadaasi oo ilaa haatan ay isa soo tarayso tirada Dhimashada iyo Dadka kale ee uu soo ridanayo cudurkaasi.
Waxaa ay Degmadda Beled-xaawo oo kaabiga ku haysa Xuduudka dalka Kenya, ayaa laga soo sheegay inay 7-qof oo isugu jirta carruur iyo dad waa weyn u geeriyoodeen cuddurkaas Qaar kalena ay la ildaran yihiin oo Noloshoodu Qarka u saarantahay Dhimasho iyo Nafaqo la,aan ka soo Foodsaartay Sababaha Shubankaasi asiibay awgiisa.
Guddoomiyaha Degmadda Beled-xaawo, Axmed Maxamed Bur-kuus, ayaa sheegay inuu cuddurka shuban-biyoodka fara ba;an ku hayo dadka deegaanka, isla markaana uu labo Toddobaad ka hor uu ka dillaacay Degmadaasi Waxaa uu Sheegay In Cudurkaasi uu laf dhuungashay ku Noqday Dadka Degaanka balse ay jiraan Dedaalo dheeriya oo ay kula tacalayaan Dhakhaatiirta Degaankaasi.
« Degmada Buraan ee G/Sanaag aya si toosa looga hir galiyaya Adeega Isgaasriineed ee Shirkada Golis
Buurta Daallo ee Gobolka Sanaag oo caawa dab Qabsaday »